Sergio Ramos Oo Lagu Soo Daray Kooxda Paris Saint-Germain Ee Kulanka Manchester City
HomeWararka CiyaarahaSergio Ramos oo lagu soo daray kooxda Paris Saint-Germain ee kulanka Manchester City
November 23, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Horyaalka France 0
Sergio Ramos ayaa ugu danbayn u safan kara kulankiisii ​​ugu horeeyay ee la wada sugayay ee Paris Saint-Germain ka dib markii lagu soo daray kooxda arbacada ee Champions Leaque-ga ku wajihi doonta Manchester City .
35-sano jirkaan ayaa u adkeystay seddex bilood oo jahwareer ah tan iyo markii uu beeca xorta ah ku yimid, iyadoo dhibaato kubka ah ay ka hor istaagtay inuu u ciyaaro kooxda Mauricio Pochettino ilaa iyo haatan.
Waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in Ramos heshiiskiisa lagu soo afjari karo dhaawacii soo gaadhay dartiis, laakiin xiddigii hore ee Real Madrid ayaa haatan u muuqda mid dib u dhigaya bilaha deyrta.
Gianluigi Donnarumma ayaa sidoo kale ka soo kabsaday xanuunka caloosha, iyadoo Lionel Messi , Kylian Mbappe iyo Neymar ay isku diyaarinayaan inay saddexda hore ee weerarka ka horyimaadaan wiilasha Pep Guardiola .
Rafinha iyo Julian Draxler ayaa labaduba dhaawac ku seegaya, halka Sergio Rico , Layvin Kurzawa iyo Juan Bernat uusan kusoo darin Pochettino.
PSG ayaa hal dhibic ka hoosaysa kooxda hogaanka haysa ee Man City oo ku jirta Group A waxayna xaqiijin doontaa in ay u soo baxday wareega 16ka.